Buy MSI Gaming i5 4th gen Laptop. Nvidia 2GB (345,000 Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
MSI Gaming i5 4th gen Laptop. Nvidia 2GB
Gaming Laptop MSI နော် . ၁၅.၆မြင်ကွင်းကျယ်. Core i5 4th gen ကိုမှ Nvidia graphic 2GB နဲ့ပါ
#Gaming မှာနာမည်တစ်လုံးတည်းနဲ့နေတဲ့ MSI နော်
#(၁၅.၆)မြင်ကွင်းကျယ်ဆိုဒ် တောင့်တင်းတဲ့ Body
#အကြမ်းခံ မယ်.. အသုံးခံမယ်.. သုံးပျော်အောင်ပေးမယ်
#CPU Core i5 4th gen(M) 2.50GHz ကိုမှ
#Nvidia Geforce 720M 2GB နဲ့ Total 4GB ထွက်
#AutoCad. Design ဆွဲ. Game ဆော့. ဘက်စုံဆွဲပါ
#ဈေးနူန်း (345,000 ks)
#CPU 👉 Core i5 4th generation 2.50GHz
#Graphic 👉 Nvidia 720M 2GB + Intel HD 2GB နဲ့ပါ #Total graphic 4GB ထွက်ပါတယ်
#Price. 345,000ks 👍👍
အမည်:MSI Gaming i5 4th gen Laptop. Nvidia 2GB